भोकमरीको कारण बाबुले चार वर्षकी छोरीलाई बिक्रिमा राखेपछि…! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
मानिसको भविश्य कस्तो हुन्छ कस्ले जानेको हुन्छ । कुन समयमा के घटना घट्छ अनि कस्तो बाध्यतामा परिन्छ भन्ने पनि कसैलाई पनि थाहा हुदैन । आज हामी तपाइलाई त्यस्तै समयले विवश बनाएको बाबुको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौ ।
यो घटना अफगानिस्तानको हो । जहाँ अहिले तालिवानले कब्जा गरेको छ र तालिवान हरुले शासन गरीरहेका छन् । उनी कति बाध्यकारी बाबु हुन्, जसले आफ्नी छोरीलाई बेच्दैछन् । परिवार भोको परेपछि बाबुले छोरीलाई बेच्न लागेका हुन् । यो मा भएको घटना हो।
ती बुबाको नाम मीर नजीर हो। नजीर १५ अगस्टसम्म अफगानिस्तान पुलिसमा एक सानो कर्मचारी थिए । जब तालिवानले देश कब्जा गरे, जागिर गुम्यो। त्यहाँ रहेको बचत सकियो । उनको परिवार बस्ने घर पनि भाडामा छ। परिवारमा जम्मा सात जना छन्। अब कसरी पेट भर्नेर?
लन्डन टाइम्सका रिपोर्टर एन्थोनी लोयडलाई मीरले भने,‘सात जनाको परिवार छ। कान्छी छोरीको नाम सफिया हो। उहाँ चार वर्षकी भइन् । जब तालिवान आयो, मैले मेरो पुलिसको जागिर गुमाएँ। अब म कसरी परिवारलाई खुवाउने, मँ खाना कहाँ बाट पाउँछु? देशको अर्थतन्त्र पनि ध्वस्त भएको छ। कतै आशा छैन। छोरी बेच्नु भन्दा म आफैं मरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर, के मेरो मृत्यु पछि पनि परिवार बाँच्न सक्छरु उनीहरुलाई रोटी कसले दिन्छ?यो एक असहाय निर्णय हो।
आँखाको अत्याचार रोक्न असफल प्रयास गर्दा, मीर थप भन्छन्,‘एक पसल भेटियो। उनले बुबा बन्ने अवसर पाएका थिएनन् । उनले मलाई प्रस्ताव गरे कि उनी मेरो सफिया किन्न चाहन्छन्। उनी उनको पसलमा पनि काम गर्छिन्। हुन सक्छ, उनको भाग्यमा सुधार हुनेछ । म अब एक प्रहरीबाट एक मजदुर बनेको छु। त्यो पसलले मेरी छोरीलाई २० हजार अफगानी (भारतीय मुद्रा अनुसार लगभग १७ हजार रुपैयाँ) मा किन्न चाहन्छ। मँ मेरी छोरीलाई यति कम मूल्यमा बेचेर के गर्नेरु मैले उसलाई ५० हजार अफगानिस्तान ९भारतीय मुद्रा मा लगभग ५० हजार रुपैयाँ० को लागी मागेको छु।
नाजीरले यो कथालाई अगाडि बढाउँछन्। यो भनिएको छ-म साफियाको बारेमो पसल संग कुराकानी चलिरहेको छ, म उसलाई के दिन सक्छ र रु सायद यो पैसाले म सारा परिवार लाई बचाउन सक्छु। त्यो पसलले मलाई प्रतिज्ञा गरेको छ कि यदि म भविष्य मा उसको पैसा फिर्ता गरे भने उसले मेरो छोरी मलाई फिर्ता दिनेछ। खुशी छु देशमा युद्ध समाप्त भयो, तर गरीबी र भोक नयाँ दुश्मन हुन्।
मुद्दा भुइँमा लिँदा, नजीर बेचैन हुन्छ। केहि रोकिन्छन् र भन्छन्, ‘म पनि तिमी जस्तै हु, नसम्झिनुस् कि म मेरो साफियालाई माया गर्दिन। तर, म बाध्य छु र त्यहाँ कुनै अन्य विकल्प छैन।रिपोर्टर्स नेपाल
प्रकाशित मिति: Sep 17, 2021